Sidee Loogu Soo Jiidhaa Macaamiisha Warshadaha Hilibka?
Waqtiga boostada: Sep-20-2020
Markii la hagaajiyay heerka nolosha dadka, cuntada hilibka ayaa si tartiib tartiib ah u noqotay qayb muhiim ah oo ka mid ah cuntada dadka. Marka laga soo tago siinta jidhka bini-aadamka heer kul gaar ah, waxay sidoo kale siisaa nafaqooyin muhiim u ah koritaanka iyo horumarka aadanaha iyo ilaalinta caafimaadka. 1. Functi ...Akhri wax dheeraad ah »
Cunto kasta oo aan cilmiyaysneyn waxaa ku jiri kara bakteeriya waxyeelo leh, fayras, dulin, sun iyo kiimiko iyo wasakhda jirka. Marka la barbar dhigo miraha iyo khudradda, hilibka cayriin waxay u badan tahay inuu qaado dulin iyo jeermis, gaar ahaan inuu qaado cudurrada zoonotic iyo parasitic. Sidaa darteed, marka lagu daro xulashada ...Akhri wax dheeraad ah »
Badbaadada Iyo Aqoonta Caafimaadka Ee Ay Tahay In Ay Ogaato Warshadaha Soo Saara Raashinka
Warshadaha cuntada, oo ay kujiraan warshada cuntada hilibka, warshada caanaha, warshada miraha iyo sharaabka, warshada miraha iyo khudradda, waxsoosaarka qasacadaysan, keega, khamriga iyo noocyada kale ee soosaarida cuntada, nadiifinta iyo nadiifinta qalabka wax soosaarka iyo tubooyinka, konteynarada, khadadka isku imaatinka , oper ...Akhri wax dheeraad ah »